एकैरातमा टिकटकबाट संसारभरि भाइरल भए यी नेपाली गायक, कसरि सम्भव भयाे यस्ताे ? — Imandarmedia.com
एकैरातमा टिकटकबाट संसारभरि भाइरल भए यी नेपाली गायक, कसरि सम्भव भयाे यस्ताे ?
काठमाडाैं । तीन महिनाअघि २० वर्षीय अभिनव बास्ताकोटीले पहिलोपटक टिकटकमा भिडियो अपलोड गरे। ‘कर्टिस वाटर्स’ नामक अकाउन्टबाट राखिएको १५ सेकेन्डको उक्त भिडियोमा अभिनव आफ्ना साथीसँग नाच्दै गरेका देखिन्छन्। पृष्ठभूमिमा सुनिन्छ, उनकै गीत- स्टनिन्।
अभिनवले आफ्नो भिडियोमा लेखेका छन्- ‘नमस्ते म कर्टिस वाटर्स। म उत्तर क्यारोलिनाको कलाकार हुँ। मैले भर्खरै आफ्नो नयाँ गीत ‘स्टनिन्’ रिलिज गरेको छु। तपाईंहरूलाई यो गीत मनपर्नेछ भन्ने आशा गर्छु।’
अभिनवको उक्त भिडियो र उनले गाएको गीत भाइरल भयो। टिकटकमा लगभग चार करोडपटक उनको गीत प्रयोग भएको छ भने युट्युबमा यसले ४० लाखभन्दा बढी भ्यूज पाएको छ। इन्टरनेटमा ‘हटकेक’ बनेका अभिनव आफूलाई ‘कर्टिस वाटर्स’ कै नामबाट चिनाउन चाहन्छन्। अमेरिकाको उत्तर क्यारोलिनामा बस्दै आएका उनी संगीत निर्माता तथा गीतकार हुन्।
उनले टिकटकमा नाचेर रिलिज गरेको गीत र भिडिओले सुरूमा खासै चर्चा पाएको थिएन। टिकटकमा करिब सय जना मात्र फलोअर्स भएकाले उनको भिडियो भाइरल हुन गाह्रो पनि थियो। उनले आफ्नो गीतलाई दर्शक-स्रोतासम्म पुर्‍याउन विभिन्न स्थानमा गएर टिकटकमै थुप्रै भिडियो अपलोड गरे।
आफ्नो गीत प्रचार गर्न छ पटकसम्म नयाँ-नयाँ भिडिओ बनाएर अपलोड गर्दा पनि कसैले पत्तो पाएनन्। सातौंचोटिको प्रयासमा भने उनको भिडियो भाइरल भयो। रातारात उनको त्यो टिकटक भिडियोले दुई लाखभन्दा बढी भ्यूज पायो।
‘त्यो रातभर म सुत्न सकिनँ। हरेक घन्टा भिडियोमा सय लाइक र कमेन्ट आइरह्यो। त्यो मेरो निम्ति एकदमै नौलो क्षण थियो,’ बेलायती अखबार गार्डियनसँगको अन्तर्वार्तामा अभिनवले भनेका छन्, ‘यसअघि कसैले नाम नसुनेको अज्ञात व्यक्ति थिएँ, एकाएक सबैको आँखामा परेँ। अहिले त यस्तो लाग्छ मलाई सबैले हेरिरहेका छन् र सबैले मबाट केही नयाँ चाहेका छन्।’
गार्डियनका अनुसार नेपालमा जन्मेका अभिनव १० वर्षको छँदा आफ्नो परिवारसँग क्यानडा गएका थिए। अध्ययन क्रममा उनका आमाबुबा जहाँ जहाँ जान्थे, उनी त्यहीँ पुग्थे। सन् २०१७ मा उनी अमेरिकाको उत्तरी क्यारोलिना गए। अहिले उनी आफ्नो परिवारसँग त्यहीँ बस्दै आएका छन्।
चौध वर्षको हुँदा अभिनवलाई संगीत क्षेत्रमा लाग्ने इच्छा जागेको थियो। त्यो बेला डिप्रेसनको शिकार भएका उनी आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न ग्राफिक डिजाइन र संगीत सिर्जना गर्ने कोशिस गर्थे। विस्तारै उनी संगीततिर बढ्ता ढल्किए। आफ्नो मनपर्ने अमेरिकी गायक इआन कर्टिस र फ्रान्क ओसनको नाम जोडेर आफ्नै नाम बनाए- कर्टिस वाटर्स।
‘कर्टिस वाटर्स मेरो दिमागमा बनेको एउटा चरित्र हो, जुन मभित्र कतै लुकेको थियो,’ अभिनवका भनाइ उद्धृत गर्दै गार्डियन लेख्छ, ‘ऊ निकै रमाइलो, उज्यालो र चञ्चले छ। अहिले म उसको स्वभावसँग मिल्ने खालको लुगा लगाउन थालेको छु। यसले गीत बनाउँदा म ऊजस्तै महशुस गर्न सक्छु।’
आफूभित्रको दोस्रो व्यक्तित्व पहिचान गरेर बाहिर ल्याएको क्षण नै उनको जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो। त्यसले उनको व्यक्तित्व झनै बलियो बनायो। संगीत सिर्जनामा उनको आत्मविश्वास बढायो। अभिनवका आमाबुबाले सुरूमा उनको ध्यान पढाइतिरै केन्द्रित होस् भन्ने चाहेका थिए। यसले अभिनवको सांगीतिक रूचि छायामा परेको थियो।
यति हुँदाहुँदै उनी आफ्नो कोठा थुनेर संगीत बनाउने थुप्रै तरिका इन्टरनेटमा खोजिरहन्थे। आखिरमा उनको लगाव देखेर आमाबाबुले पनि उनको रूचिमा समर्थन गर्न थाले। सिकारू अभिनव आफ्नै संगीत बनाउन चाहन्थे, तर उनलाई संगीत सिर्जना गर्ने फुर्सद मिलेको थिएन।
‘पढाइपछि म पार्टटाइम काम गर्थें, त्यसैले खाली समय कमै हुन्थ्यो,’ अभिनवले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘लकडाउन मेरो लागि एउटा अवसर बन्यो। अरू केही काम नभएकै कारण टिकटक चलाउन थालेको थिएँ। नत्र त टिकटकमा नाच्दै भिडियो हाल्ने फुर्सद कहाँ मिल्थ्यो र!’
उनले लकडाउनकै बेला आफ्नो घरको ग्यारेजमा साथीसँग मिलेर ‘स्टनिन्’ गीतको भिडियो बनाएका हुन्। पहिलो गीत भाइरल भएपछि उनी अचेल नयाँ-नयाँ गीत बनाउन लागिपरेका छन्। आफ्नो गीतले देश-विदेशबाट धेरैको माया र समर्थन पाइरहेकोमा एकदमै सन्तोष लागेको उनी बताउँछन्।
पछिल्लो समय टिकटकले अभिनवजस्ता थुप्रै नयाँ कलाकारलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठाउँ दिएको छ। एक वर्षयता कतिपय कलाकार टिकटकबाटै विश्वभरि चिनिन सफल भएका छन्। तीमध्ये चर्चित अमेरिकी र्‍यापर लिल नास एक्स र गायिका डोजा क्याट उदाहरणीय छन्।
‘अहिले संगीत क्षेत्र टिकटकमा केन्द्रित छ। जुन कलाकारको गीत ट्रेन्डिङमा छ, मानिसहरू उसैसँग काम गर्न चाहन्छन्,’ अभिनव भन्छन्, ‘इन्टरनेटले हामीलाई आफ्नो सिप निखार्न सहज बनाइदिएको छ। अझ संगीत क्षेत्रमा आउन चाहनेलाई त यसले झनै राम्रो अवसर दिएको छ।’ उनी थप्छन्, ‘इन्टरनेटको पूरा फाइदा लिएर मिहिनेत गर्ने हो भने हामीलाई अघि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन।’